सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ – रेखा थापा – sagunkhabar.com
काठमाडौं २९ फागुन । सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा आपराधिक संगठन भएको ठहर गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि । सामाजिक सञ्जालमा जताततै सरकार बिरुद्ध कडा टिकाटिप्पणी आउन थालेको छ ।
कलाकार देखि धेरै बरिस्ठ ब्यक्तिहरुको फेसबुक वाल अहिले विप्लव समुहको पक्षमा उर्लेको छ ।’केही दिन अगाडि मात्र डा. सीके राउत सँग ११ बुदे सहमति गरेर चर्को आलोचना खेपिरहेका सरकारलाई फेरि अर्को ठूलो झट्का लागेको छ ।
यहि बिषयमा चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले पनि आफ्नो तर्क राखेका छन् । समयसामयिक बिषयमा चर्को आवाज उठाउने एक मात्र नायिका थापा हुन् । केही दिन अगाडि सरकारले एयरपोर्टमा भन्सार कडाइ गरे सँगै नायिका थापाले कडा एक्सन सरकार बिरुद्ध लिएका थिए । सरकार र सीके राउत बिच सहमति भए सँगै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
पढ्नुहोस् नायिका रेखा थापाको लेख यस्तो छ ।
सरकारले जनातामाथी जबरजस्ती युद्ध लादन खोजी रहेको छ, जून क़ुरा दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आम नेपाली जनताले यो बिषयमा गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ने बेला आयो !!